“ပထမခြေလှမ်းကို စလိုက်ဖို့ ဘယ်တော့မှမကြောက်ပါနဲ့”ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး CEO ညီအစ်မ (သို့) Lady B Myanmar ပဲ့ကိုင်ရှင် ဝင့်နဲ့လွင် - For her Myanmar
Interviews, News>Women News
Lady B ဆိုပြီး ပေါ်ပေါက်လာအောင် သူတို့ဘယ်လိုအသက်သွင်းခဲ့ကြတာလဲဆိုတော့ …
ယောင်းတို့ရေ … ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဦးဆောင်သူအမျိုးသမီးတွေ နယ်ပယ်ပေါင်းစုံကနေ ပေါ်ထွက်နေပါပြီ။ ဒီထဲကမှ Lady B Myanmar ရဲ့ ပဲ့ကိုင်သူအမျိုးသမီးတွေဖြစ်တဲ့ မဝင့်နဲ့မလွင်တို့ ညီအစ်မနဲ့အတူ ကြုံတုန်းဆုံတုန်း အမေးအဖြေလေးလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကို ယောင်းတို့အတွက် မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
Q : အစ်မတို့နှစ်ယောက်နဲ့ Lady B အကြောင်းလေးမိတ်ဆက်ပေးပါဦး။
W : အစ်မကတော့ ဝင့်ပါ။ ဆယ်တန်းပြီးတော့ အစ်မစင်္ကာပူမှာကျောင်းတက်တယ်။ တက်တဲ့ကျောင်းက Tourism Business။ အလုပ်ထွက်ပြီးနောက်ပိုင်း အွန်လိုင်းရှော့ပင်းလေးလုပ်မယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားနေတုန်း တစ်နေ့ကျတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အိတ်ဒီဇိုင်းတစ်ခုတွေ့တယ်။ တွေ့တဲ့အခါ ဒီလိုပုံစံလေးလိုချင်တယ် ရမလား ဆိုပြီးမှာတဲ့အခါကျတော့ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျမရဘူးပေါ့နော်။ အဲ့တော့ကိုယ့်လို အိတ် crazy တွေအတွက် စိတ်တိုင်းကျရနိုင်မယ့် ဒီဇိုင်းမျိုး ကိုယ်တိုင်ထုတ်မယ်ဆိုပြီး စက်ရုံတွေလိုက်ရှာပြီး လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။
L : အစ်မနာမည်က လွင်ပါ။ Lady B ကို အစ်မတို့ညီအစ်မစလုပ်ခဲ့တာပေါ့။ အဓိက အိတ်ကိုဝါသနာပါတာကတော့ မဝင့်။ သူ့မှာအိတ်ဆို ဈေးကြီးတာရော၊ ဈေးပေါတာရော အကုန်ရှိတယ်။ Lady B ကို စထောင်တုန်းက စကာင်္ပူမှာအလုပ်လုပ်နေတာ အစ်မက။ တစ်ရက်ကျတော့ သူကအစ်မကို လာပြောတယ်။ အိတ်ဘရန်းဒ်လေးလုပ်မယ်၊ နာမည်ကိုဒီလိုပေးထားတယ်၊ ဒီလိုဒီဇိုင်းလေးတွေတော့ထုတ်မယ်ဆိုပြီး။ ဒီလိုနဲ့ ဒီဇိုင်းရော အရောင်ရော အခြေကျသွားတဲ့အခါ ရှိတဲ့ဘက်ဂျက်လေးနဲ့ လုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့။
Q : Lady B ကို ဘယ်နှခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့တာလဲရှင့် ?
A : စတည်ထောင်ခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၆၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄) ရက်မှာပါ။ ဗယ်လင်တိုင်းဒေးပေါ့။
Q : Lady B က လောလောဆယ်ဘယ်လို product လေးတွေထွက်ထားလဲ ပြောပြပေးပါဦး ?
A : စထွက်ခဲ့တာကတော့ အိတ်နဲ့ပေါ့နော်။ နောက်တော့ အိတ်မှာချည်တဲ့ ပိုးပုဝါ twilly လေးတွေထွက်တယ်။ အခုတော့ လွင်က ဖိနပ် crazy ဆိုတော့ ဖိနပ်ပါ ထုတ်နေပါပြီ။
Q : လက်ရှိမှာဆိုင်ခွဲဘယ်နှဆိုင်လောက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီလဲရှင့်?
A: ဆိုင်ခွဲက လောလောဆယ် (၄) ဆိုင်။ ရန်ကုန်မှာ တစ်ဆိုင်၊ မန္တလေးမှာ တစ်ဆိုင်၊ တောင်ကြီးတစ်ဆိုင်၊ နောက်ပြီး မကွေးမှာတစ်ဆိုင်။ ရန်ကုန်မှာ နောက်တစ်ဆိုင်ထပ်ဖွင့်ဖို့ရှိတယ်။ Junction Square အရှေ့က အသစ်ဖွင့်မယ့် Times City မှာ။ တာမွေမှာတော့ showroom ရှိတယ်။
Q : Lady B ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က … ?
A : အစ်မတို့စလုပ်တုန်းက မြန်မာပြည်မှာ အိတ်ကို ပြည်တွင်းဘရန်းဒ်ဆိုတာ သိပ်မရှိဘူး။ အစ်မအနေနဲ့ နိုင်ငံခြားကအိတ်တွေလို ကွာလတီကောင်းပြီး ဈေးအသင့်အတင့်ရှိတဲ့ ပြည်တွင်းဘရန်းဒ်အိတ်တွေကို ကိုင်စေချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ပါ။
Q : ကိုယ်ပိုင်ဘရန်းဒ်တစ်ခုရယ်လို့ ဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲရှင့် ?
A : အခက်အခဲတွေကတော့ အများကြီးပဲ။ စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ အခက်အခဲတော့ရှိတာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘရန်းဒ်ဖြစ်နေတော့ ဖိအားပိုများတယ်။ အစ်မတို့ဘက်က ကွာလတီထိန်းရတာရော၊ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာရော အခက်အခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရဖြစ်နေတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုတော့ ပထမဆုံးဖိနပ်ထုတ်တော့ အရမ်းပေါက်သွားတယ်။ ကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိသလို အဆိုးဘက်က ဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်။ တခြားနိုင်ငံခြားဘရန်းဒ်တစ်ခုရဲ့ ဒီဇိုင်းကို ကော်ပီကူးပါတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်တိုက်ခိုက်သူတွေလည်း ရှိခဲ့တာပေါ့။
Q : ဒီအခြေအနေကို ရောက်လာအောင် အများဆုံးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာကရော ?
A : အဖေပေါ့။ အဖေက အစ်မတို့ကိုအရမ်းဖြစ်စေချင်တယ်။ အဖေက စီးပွားရေးလုပ်တာအရမ်းသဘောကျတယ်။ အကြံဉာဏ်တွေပေးတယ်။ ပိုက်ဆံချေးပေးတယ်။ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ များလာရင် အဖေက စိတ်ကိုပြန်တွန်းတင်ပေးတယ်။ အမေကလည်း တိုက်ရိုက်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ ကလေးကြည့်ပေးတာတို့ ဘာတို့လုပ်ပေးတတ်တာလေးတွေရှိတယ်။
Q : လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲ ?
L : အစ်မထင်တာကတော့ leadership role မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ စံပြအမျိုးသမီးတွေလည်း အများကြီးပဲ။ သူတို့တွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ အားဖြစ်စေတာပေါ့နော်။ အရင်ခေတ်ကနဲ့မတူဘဲ မိန်းကလေးတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်လည်း တွင်ကျယ်လာတော့ စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသေးပေမဲ့ ပိုအခွင့်အရေးရှိလာတယ်လို့မြင်တယ်။
W : အစ်မအတွက် အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့ ကလေးမွေးလိုက်တာပဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်ကစပြီး ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်တယ်။ ကလေးမွေးပြီးတော့လည်း ကလေးကိစ္စနဲ့ အလုပ်ကိုချက်ချင်းပြန်မလုပ်နိုင်ဘူး။ ကလေးငယ်သေးတော့ အလုပ်ကို ထင်သလောက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ အဲ့ဒါကတော့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပေါ့နော်။
Q : မိသားစုနဲ့အလုပ်ကြားမှာကော အချိန်ဘယ်လိုခွဲထားလဲ ?
W : အစ်မကတော့ တစ်ရက်ကို အလုပ်ကိစ္စရှိလို့ ကလေးကိုပေးရမယ့် အချိန်လျော့သွားရင် နောက်တစ်ရက်မှာ ကလေးအတွက် အချိန်ပိုပေးတယ်။ တစ်လှည့်စီပေါ့။
L : အစ်မကတော့ တစ်ချို့နေ့တွေဆို အရမ်းအလုပ်ရှုပ်တယ်။ တစ်ခါတလေ သုံးလေးရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ အဲ့လိုမျိုးဆို ကလေးကို လုံးဝလွတ်သွားတာပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ နောက်နေ့တွေမှာတော့ ကလေးနဲ့ပြန်နေတယ်။ တူတူဆော့ပေးတယ်။ အဲ့လိုလေး ပျော်အောင်ထားပေးရတာပေါ့။
Q : မိခင်တွေအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေမှာကော ဘာတွေလုပ်ဖြစ်လဲ ?
W : အစ်မကတော့ gym ဆော့တယ်။ အိမ်မှာဆိုလည်း နှစ်နာရီသုံးနာရီလောက် အချိန်ပေးပြီး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်။ အဲ့လိုအချိန်တွေဆို စိတ်ဖိစီးမှုတွေ လျော့သွားတယ်။ နောက်တစ်ခုက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သွားတွေ့တာမျိုးပေါ့။
L : အစ်မအတွက်ကတော့ အပြင်ထွက်ရင် ကိုယ်ပိုင်အချိန်ပဲ။ အိမ်မှာဆို သမီးကအစ်မကို အရမ်းကပ်တယ်။ အစ်မနားက မခွာဘူး။ အဲ့တော့ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အပြင်ထွက်ရင် me time (ကိုယ့်အတွက်အချိန်)ပါပဲ။ အခုသူလည်း နည်းနည်းကြီးလာလို့ လက်လွှတ်လို့ရတဲ့အချိန်ဆိုတော့ me time က လုပ်ယူလို့ရနေပါပြီ။
Q : Lady B နဲ့ပတ်သက်ပြီး နောက်ထပ်ဘာတွေဆက်လုပ်ဖို့ရှိသေးလဲ ?
A : အစ်မတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အိတ်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ handmade ချုပ်ရတဲ့နေရာလေးတွေအတွက် ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ချင်တယ်။ Made in Myanmar product တစ်ခုဖြစ်လာစေချင်တယ်။ နိုင်ငံခြားကလူတွေအနေနဲ့ ဒီလိုကွာလတီကောင်းကောင်း အိတ်တစ်လုံးကို မြန်မာနိုင်ငံကမှာလို့ရတယ် ဆိုတာမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်တွေကြာလာရင် စက်ရုံတစ်ခုဖွင့်ချင်တယ်။ အလုပ်သမားတွေကိုလည်း သေချာလေ့ကျင့်ပေးချင်တယ်။
Q : ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို ဘာများအကြံဉာဏ်ပေးချင်တာရှိလဲ ?
W : အဓိကကတော့ ပထမခြေလှမ်းကို စလိုက်ဖို့ ဘယ်တော့မှမကြောက်ပါနဲ့။ နည်းနည်းပဲရှိရင် နည်းနည်းလေးနဲ့ပဲစလိုက်ပါ။ ဘယ်လောက်ပဲသေးနေပါစေဦးတော့ ကိုယ့် product က သူများနဲ့မတူဘူး၊ ကိုယ့်အိုင်ဒီယာက ကောင်းတယ်ဆိုရင် လူတွေက သဘောကျကြမှာပဲ။ ရှိတဲ့ဘက်ဂျက်ကနေ အမြတ်ကို ပေါင်းပြီးထပ်ချဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အရင်ဆုံး လုပ်ဖြစ်အောင်စလုပ်လိုက်ဖို့ကပဲ အရေးအကြီးဆုံးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
L : အစ်မအတွေးကတော့ မဝင့်နဲ့ တူတယ်။ အစ်မတို့ကိုယ်တိုင်လည်း အတွေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ ချက်ချင်း အကောင်အထည်ဖော်ပြီး စလုပ်လိုက်လို့သာ Lady B ဆိုတာဖြစ်လာတာလေ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလည်း customer ကို product ကောင်းကောင်းပေးဖို့ တွေးထားရမယ်။ နာမည်ကောင်းတစ်ခုကို ထိန်းထားချင်ရင် တစ်ပွဲတိုး သွားလုပ်လိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ ပြီးတော့ အလွယ်တကူအရှုံးမပေးဖို့ပါ။ အရမ်းစိတ်ဖိစီးလာရင် ခရီးထွက်လိုက်တာမျိုးနဲ့ break ယူလိုက်ပေါ့။ ပြီးမှအလုပ်ဆက်လုပ်ပါ။
ယောင်းတို့ရေ … ဒါကတော့ Lady B ရဲ့ founder နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မဝင့်နဲ့မလွင်တို့ညီအစ်မနှစ်ယောက် ပြောပြပေးသွားတဲ့ အောင်မြင်မှုခြေလှမ်းအဆင့်ဆင့်ပါ။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Success Story လေးက ယောင်းတို့အတွက် အတုယူစရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ Stella ထင်ပါတယ်။
ယောင်းတို့သိချင်တာလေးတွေရှိရင်လည်း ကွန်မန့်မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်နော် …
Lady B ဆိုပွီး ပျေါပေါကျလာအောငျ သူတို့ဘယျလိုအသကျသှငျးခဲ့ကွတာလဲဆိုတော့ …
ယောငျးတို့ရေ … ဒီနခေ့တျေမှာ ဦးဆောငျသူအမြိုးသမီးတှေ နယျပယျပေါငျးစုံကနေ ပျေါထှကျနပေါပွီ။ ဒီထဲကမှ Lady B Myanmar ရဲ့ ပဲ့ကိုငျသူအမြိုးသမီးတှဖွေဈတဲ့ မဝငျ့နဲ့မလှငျတို့ ညီအဈမနဲ့အတူ ကွုံတုနျးဆုံတုနျး အမေးအဖွလေေးလုပျဖွဈခဲ့တာကို ယောငျးတို့အတှကျ မြှဝပေေးလိုကျရပါတယျနျော။
Q : အဈမတို့နှဈယောကျနဲ့ Lady B အကွောငျးလေးမိတျဆကျပေးပါဦး။
W : အဈမကတော့ ဝငျ့ပါ။ ဆယျတနျးပွီးတော့ အဈမစင်ျကာပူမှာကြောငျးတကျတယျ။ တကျတဲ့ကြောငျးက Tourism Business။ အလုပျထှကျပွီးနောကျပိုငျး အှနျလိုငျးရှော့ပငျးလေးလုပျမယျဆိုပွီး စဉျးစားနတေုနျး တဈနကေ့တြော့ ကိုယျကွိုကျတဲ့အိတျဒီဇိုငျးတဈခုတှတေ့ယျ။ တှတေဲ့အခါ ဒီလိုပုံစံလေးလိုခငျြတယျ ရမလား ဆိုပွီးမှာတဲ့အခါကတြော့ ကိုယျ့စိတျတိုငျးကမြရဘူးပေါ့နျော။ အဲ့တော့ကိုယျ့လို အိတျ crazy တှအေတှကျ စိတျတိုငျးကရြနိုငျမယျ့ ဒီဇိုငျးမြိုး ကိုယျတိုငျထုတျမယျဆိုပွီး စကျရုံတှလေိုကျရှာပွီး လုပျဖွဈသှားတာပါ။
L : အဈမနာမညျက လှငျပါ။ Lady B ကို အဈမတို့ညီအဈမစလုပျခဲ့တာပေါ့။ အဓိက အိတျကိုဝါသနာပါတာကတော့ မဝငျ့။ သူ့မှာအိတျဆို ဈေးကွီးတာရော၊ ဈေးပေါတာရော အကုနျရှိတယျ။ Lady B ကို စထောငျတုနျးက စကာင်္ပူမှာအလုပျလုပျနတော အဈမက။ တဈရကျကတြော့ သူကအဈမကို လာပွောတယျ။ အိတျဘရနျးဒျလေးလုပျမယျ၊ နာမညျကိုဒီလိုပေးထားတယျ၊ ဒီလိုဒီဇိုငျးလေးတှတေော့ထုတျမယျဆိုပွီး။ ဒီလိုနဲ့ ဒီဇိုငျးရော အရောငျရော အခွကေသြှားတဲ့အခါ ရှိတဲ့ဘကျဂကျြလေးနဲ့ လုပျဖွဈသှားတာပေါ့။
Q : Lady B ကို ဘယျနှခုနှဈမှာ တညျထောငျခဲ့တာလဲရှငျ့ ?
A : စတညျထောငျခဲ့တာကတော့ ၂၀၁၆၊ ဖဖေျောဝါရီ (၁၄) ရကျမှာပါ။ ဗယျလငျတိုငျးဒေးပေါ့။
Q : Lady B က လောလောဆယျဘယျလို product လေးတှထှေကျထားလဲ ပွောပွပေးပါဦး ?
A : စထှကျခဲ့တာကတော့ အိတျနဲ့ပေါ့နျော။ နောကျတော့ အိတျမှာခညျြတဲ့ ပိုးပုဝါ twilly လေးတှထှေကျတယျ။ အခုတော့ လှငျက ဖိနပျ crazy ဆိုတော့ ဖိနပျပါ ထုတျနပေါပွီ။
Q : လကျရှိမှာဆိုငျခှဲဘယျနှဆိုငျလောကျဖှငျ့လှဈနိုငျခဲ့ပွီလဲရှငျ့?
A: ဆိုငျခှဲက လောလောဆယျ (၄) ဆိုငျ။ ရနျကုနျမှာ တဈဆိုငျ၊ မန်တလေးမှာ တဈဆိုငျ၊ တောငျကွီးတဈဆိုငျ၊ နောကျပွီး မကှေးမှာတဈဆိုငျ။ ရနျကုနျမှာ နောကျတဈဆိုငျထပျဖှငျ့ဖို့ရှိတယျ။ Junction Square အရှကေ့ အသဈဖှငျ့မယျ့ Times City မှာ။ တာမှမှောတော့ showroom ရှိတယျ။
Q : Lady B ရဲ့ ရညျရှယျခကျြက … ?
A : အဈမတို့စလုပျတုနျးက မွနျမာပွညျမှာ အိတျကို ပွညျတှငျးဘရနျးဒျဆိုတာ သိပျမရှိဘူး။ အဈမအနနေဲ့ နိုငျငံခွားကအိတျတှလေို ကှာလတီကောငျးပွီး ဈေးအသငျ့အတငျ့ရှိတဲ့ ပွညျတှငျးဘရနျးဒျအိတျတှကေို ကိုငျစခေငျြတယျ။ ဒါကွောငျ့ပါ။
Q : ကိုယျပိုငျဘရနျးဒျတဈခုရယျလို့ ဖွဈလာအောငျ ကွိုးစားခဲ့တဲ့အခါမှာ ဘယျလိုအခကျအခဲတှနေဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရလဲရှငျ့ ?
A : အခကျအခဲတှကေတော့ အမြားကွီးပဲ။ စီးပှားရေးလုပျတယျဆိုတာ အခကျအခဲတော့ရှိတာပေါ့နျော။ ဒါပမေဲ့ကိုယျပိုငျဘရနျးဒျဖွဈနတေော့ ဖိအားပိုမြားတယျ။ အဈမတို့ဘကျက ကှာလတီထိနျးရတာရော၊ ငှကွေေးပိုငျးဆိုငျရာမှာရော အခကျအခဲတှအေမြားကွီးရှိခဲ့ပါတယျ။ မှတျမှတျရရဖွဈနတေဲ့ အခကျအခဲတဈခုတော့ ပထမဆုံးဖိနပျထုတျတော့ အရမျးပေါကျသှားတယျ။ ကွိုကျတဲ့သူတှလေညျးရှိသလို အဆိုးဘကျက ဝဖေနျတဲ့သူတှလေညျးရှိခဲ့တယျ။ တခွားနိုငျငံခွားဘရနျးဒျတဈခုရဲ့ ဒီဇိုငျးကို ကျောပီကူးပါတယျဆိုပွီး ဝဖေနျတိုကျခိုကျသူတှလေညျး ရှိခဲ့တာပေါ့။
Q : ဒီအခွအေနကေို ရောကျလာအောငျ အမြားဆုံးထောကျပံ့ပေးခဲ့တာကရော ?
A : အဖပေေါ့။ အဖကေ အဈမတို့ကိုအရမျးဖွဈစခေငျြတယျ။ အဖကေ စီးပှားရေးလုပျတာအရမျးသဘောကတြယျ။ အကွံဉာဏျတှပေေးတယျ။ ပိုကျဆံခြေးပေးတယျ။ စိတျရှုပျစရာတှေ မြားလာရငျ အဖကေ စိတျကိုပွနျတှနျးတငျပေးတယျ။ အမကေလညျး တိုကျရိုကျကွီးမဟုတျပမေဲ့ ကလေးကွညျ့ပေးတာတို့ ဘာတို့လုပျပေးတတျတာလေးတှရှေိတယျ။
Q : လုပျငနျးခှငျဝငျနတေဲ့အမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့ ဘယျလိုစိနျချေါမှုတှေ ကွုံတှခေဲ့ရလဲ ?
L : အဈမထငျတာကတော့ leadership role မှာ ဦးဆောငျနတေဲ့ စံပွအမြိုးသမီးတှလေညျး အမြားကွီးပဲ။ သူတို့တှရှေိနတေဲ့အခါကတြော့ အားဖွဈစတောပေါ့နျော။ အရငျခတျေကနဲ့မတူဘဲ မိနျးကလေးတှလေုပျနိုငျတယျဆိုတဲ့အမွငျလညျး တှငျကယျြလာတော့ စိနျချေါမှုတှရှေိနသေေးပမေဲ့ ပိုအခှငျ့အရေးရှိလာတယျလို့မွငျတယျ။
W : အဈမအတှကျ အကွီးမားဆုံးစိနျချေါမှုကတော့ ကလေးမှေးလိုကျတာပဲ။ ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခြိနျကစပွီး ဟျောမုနျးအပွောငျးအလဲတှဖွေဈတယျ။ ကလေးမှေးပွီးတော့လညျး ကလေးကိစ်စနဲ့ အလုပျကိုခကျြခငျြးပွနျမလုပျနိုငျဘူး။ ကလေးငယျသေးတော့ အလုပျကို ထငျသလောကျအခြိနျမပေးနိုငျဘူး။ အဲ့ဒါကတော့ စိနျချေါမှုတဈခုပေါ့နျော။
Q : မိသားစုနဲ့အလုပျကွားမှာကော အခြိနျဘယျလိုခှဲထားလဲ ?
W : အဈမကတော့ တဈရကျကို အလုပျကိစ်စရှိလို့ ကလေးကိုပေးရမယျ့ အခြိနျလြော့သှားရငျ နောကျတဈရကျမှာ ကလေးအတှကျ အခြိနျပိုပေးတယျ။ တဈလှညျ့စီပေါ့။
L : အဈမကတော့ တဈခြို့နတှေ့ဆေို အရမျးအလုပျရှုပျတယျ။ တဈခါတလေ သုံးလေးရကျဆကျတိုကျဖွဈသှားတာမြိုးလညျးရှိတယျ။ အဲ့လိုမြိုးဆို ကလေးကို လုံးဝလှတျသှားတာပေါ့နျော။ ဒါပမေဲ့ နောကျနတှေ့မှောတော့ ကလေးနဲ့ပွနျနတေယျ။ တူတူဆော့ပေးတယျ။ အဲ့လိုလေး ပြျောအောငျထားပေးရတာပေါ့။
Q : မိခငျတှအေနနေဲ့ ကိုယျပိုငျအခြိနျတှမှောကော ဘာတှလေုပျဖွဈလဲ ?
W : အဈမကတော့ gym ဆော့တယျ။ အိမျမှာဆိုလညျး နှဈနာရီသုံးနာရီလောကျ အခြိနျပေးပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတယျ။ အဲ့လိုအခြိနျတှဆေို စိတျဖိစီးမှုတှေ လြော့သှားတယျ။ နောကျတဈခုက သူငယျခငျြးတှနေဲ့ သှားတှတေ့ာမြိုးပေါ့။
L : အဈမအတှကျကတော့ အပွငျထှကျရငျ ကိုယျပိုငျအခြိနျပဲ။ အိမျမှာဆို သမီးကအဈမကို အရမျးကပျတယျ။ အဈမနားက မခှာဘူး။ အဲ့တော့ အလုပျကိစ်စနဲ့ဖွဈဖွဈ၊ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ဖွဈဖွဈ အပွငျထှကျရငျ me time (ကိုယျ့အတှကျအခြိနျ)ပါပဲ။ အခုသူလညျး နညျးနညျးကွီးလာလို့ လကျလှတျလို့ရတဲ့အခြိနျဆိုတော့ me time က လုပျယူလို့ရနပေါပွီ။
Q : Lady B နဲ့ပတျသကျပွီး နောကျထပျဘာတှဆေကျလုပျဖို့ရှိသေးလဲ ?
A : အဈမတို့ရဲ့ ရညျရှယျခကျြက အိတျတဈခုဖွဈလာဖို့ handmade ခြုပျရတဲ့နရောလေးတှအေတှကျ ကိုယျ့မွနျမာနိုငျငံမှာလုပျခငျြတယျ။ Made in Myanmar product တဈခုဖွဈလာစခေငျြတယျ။ နိုငျငံခွားကလူတှအေနနေဲ့ ဒီလိုကှာလတီကောငျးကောငျး အိတျတဈလုံးကို မွနျမာနိုငျငံကမှာလို့ရတယျ ဆိုတာမြိုးဖွဈစခေငျြတယျ။ ဒါကွောငျ့ နှဈတှကွောလာရငျ စကျရုံတဈခုဖှငျ့ခငျြတယျ။ အလုပျသမားတှကေိုလညျး သခြောလကေ့ငျြ့ပေးခငျြတယျ။
Q : ကိုယျပိုငျလုပျငနျးတဈခုလုပျဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ အမြိုးသမီးတှကေို ဘာမြားအကွံဉာဏျပေးခငျြတာရှိလဲ ?
W : အဓိကကတော့ ပထမခွလှေမျးကို စလိုကျဖို့ ဘယျတော့မှမကွောကျပါနဲ့။ နညျးနညျးပဲရှိရငျ နညျးနညျးလေးနဲ့ပဲစလိုကျပါ။ ဘယျလောကျပဲသေးနပေါစဦေးတော့ ကိုယျ့ product က သူမြားနဲ့မတူဘူး၊ ကိုယျ့အိုငျဒီယာက ကောငျးတယျဆိုရငျ လူတှကေ သဘောကကြွမှာပဲ။ ရှိတဲ့ဘကျဂကျြကနေ အမွတျကို ပေါငျးပွီးထပျခြဲ့လိုကျလို့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အရငျဆုံး လုပျဖွဈအောငျစလုပျလိုကျဖို့ကပဲ အရေးအကွီးဆုံးပါလို့ ပွောခငျြပါတယျ။
L : အဈမအတှေးကတော့ မဝငျ့နဲ့ တူတယျ။ အဈမတို့ကိုယျတိုငျလညျး အတှေးဝငျလာတဲ့အခြိနျမှာ ခကျြခငျြး အကောငျအထညျဖျောပွီး စလုပျလိုကျလို့သာ Lady B ဆိုတာဖွဈလာတာလေ။ ပွီးတော့ ကိုယျ့ရဲ့စိတျကလညျး customer ကို product ကောငျးကောငျးပေးဖို့ တှေးထားရမယျ။ နာမညျကောငျးတဈခုကို ထိနျးထားခငျြရငျ တဈပှဲတိုး သှားလုပျလိုကျလို့မရဘူးပေါ့နျော။ ပွီးတော့ အလှယျတကူအရှုံးမပေးဖို့ပါ။ အရမျးစိတျဖိစီးလာရငျ ခရီးထှကျလိုကျတာမြိုးနဲ့ break ယူလိုကျပေါ့။ ပွီးမှအလုပျဆကျလုပျပါ။
ယောငျးတို့ရေ … ဒါကတော့ Lady B ရဲ့ founder နှဈဦးဖွဈတဲ့ မဝငျ့နဲ့မလှငျတို့ညီအဈမနှဈယောကျ ပွောပွပေးသှားတဲ့ အောငျမွငျမှုခွလှေမျးအဆငျ့ဆငျ့ပါ။ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ Success Story လေးက ယောငျးတို့အတှကျ အတုယူစရာဖွဈလိမျ့မယျလို့ Stella ထငျပါတယျ။
Tags: bags, Career, Fashion, female power, Interview, Shoes, styling, success story, women empowerment, work